I-SUITE - I-Airbnb
Orpesa/Oropesa del Mar, Comunidad Valenciana, i-Spain
Igumbi e-i-boutique hotel ibungazwe ngu-Asun
U-Asun unokuphawula okungu-97 kwezinye izindawo.
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Asun izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Indlu iyindawo yokuhlala eyingqayizivele neyangempela.
Itholakala edolobheni elidala lase-Oropesa del Mar. Siyibuyisele ngothando ukuze sabelane ngayo nanoma ubani ofuna ukwazi indawo. Ungakwazi ukudonsa ukuzola futhi sizungezwe yimvelo, ulwandle ngemizuzu engu-15 uhamba ngezinyawo kanye nesimo semvelo se-Desierto de las Palmas imizuzu engu-5 ngemoto. Ngaphezu kwe- "Suite", sikunikeza amanye amakamelo angu-3 endlini eyodwa futhi kubantu abangu-2 ngamunye.
Isenkabeni yedolobha emgwaqweni othule kakhulu wabahamba ngezinyawo. Indlu eyayingogogo bethu futhi siyibuyisele ngokuhlonipha zonke izindinganiso zokwakha zesikhathi ngokunethezeka kwanamuhla. Kuyinto ejwayelekile ye-Valencian yekhulu lama-20 lokuqala. Ilungele abathandi bezobuciko, izinto zakudala nabantu abafuna ukwazi izimpande zethu. Ayikho indawo enjengale, uma ufuna ukujabulela ukuhlala endlini yesimanje
Kukhona wonke amasevisi ayisisekelo azungeze, amathilomu, izindawo zokudlela, izimakethe ezinkulu, amakhemisi, isiteshi sebhasi, isiteshi sesitimela.. Indawo yami yokuhlala ilungele abantu abashadile, abavakashayo, nabahamba ngebhizinisi.
Yebo, siyatholakala ukukusiza nganoma yimiphi imibuzo noma ukwazisa ngesikhathi sokuhlala kwakho
Inombolo yepholisi: H-CS-684
Hlola ezinye izinketho ezise- Orpesa/Oropesa del Mar namaphethelo